Ehlobo 2014 - akusona isikhathi sokuqeda amabhuzu
Izikhumba zasehlobo ziyingqayizivele, kodwa zakha kakhulu embonini yemfashini. Sebewunqobe ukuthandwa okumangalisayo futhi, ngaphezu kwalokho, sekube yi-hit yangempela yokuthengisa. Akumangalisi, ngoba lezi zicathulo zigqamisa ngokucacile ubulili nokuzibophezela kwesithombe, ukugqamisa umnikazi walo esixukwini se-monotony esicindezelayo.
Imfashini yezikhumba ezingavamile "emgodini" ivela emazweni ashisayo afudumele, okuyinto ebanda kakhulu ebanda ebusika kuyiqiniso elingenangqondo. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi yikuphi, ngisho nokungabikho kwamaqhwa akuyona isizathu sokukhohlwa ngezikhumba ze-chic. Le nkolelo yayiyizwi lokuhlukanisa abakhiqizi abangazange banqikaze futhi badala izicathulo ezingavamile neziyinkimbinkimbi.
Izikhumba ezikhanyayo kancane kancane zafudukela kithi, zithandana nesixuku samantombazane amaningi. Ngakho amabhuzu "emgodini" - akusikho konke okweqile komcabango wokuklama, kodwa ngokuphambene nalokho - ohloniphekile futhi, ngendlela, izicathulo ezisezingeni eliphezulu kakhulu.
Umehluko omkhulu phakathi kwezikhumba zasehlobo ezivela kubafowabo abafudumele kuba khona kwezici ezivulekile (izithende, izinyosi, ama-ankle, njll). Lesi sitayela sithathwa njengesiqalo salolu hlobo lwezinqathu. Kodwa-ke, kunamamodeli amaningi avaliwe ayenziwe ngezinto ezincane kakhulu - i-suede, lesikhumba, izindwangu noma i-lace. Ngaphezu kwalokho, amabhuzu angagqulwa ngisho nase-denim, i-flax nekotini. Kulesi simo, kungakhathaliseki ukuthi yikuphi ukwaziswa, amabhuthi anjalo azoba imininingwane eyinhloko yimuphi umfanekiso wehlobo.
Amamodeli ajwayelekile kunazo zonke amabhuzu alula, angokwemvelo, emgodini, nge-perforations kanye nama-slits ahlukahlukene. Ngesikhathi esifanayo, abaklami bazinzile kakhulu, bajika izimbobo ezincane ezivamile emisebenzini yobuciko yangempela. Ubude be-bootleg bungaba yilokho lutho, kodwa ama-bootlegs amahhala webude obuphakathi ayenziwa kakhulu.
Amantombazane amaningi akholelwa ukuthi imilenze ebhuthini ehlobo ifudumele kakhulu, futhi kule ndaba bayathanda ukweqa izicathulo zomkhuba ngokufanayo. Yiqiniso, izicathulo ezinjalo aziklanyelwe amazinga okushisa aphezulu, kodwa ukushisa kwama-25-degree kuyoba yinto enhle futhi ehle kakhulu.
Kodwa-ke, ikakhulu kulabo abesaba ukushisa ngokweqile, abaklami befashini banikeze isitayela esihlukile - "isikhala sesikhumba" kanye "nezikhumba-izikhukhula." Umqondo wokuthi ubukeka kanjani, uphinde usebenzise igama labo. Isici sesici sezinyawo ezinjalo yizindawo ezivulekile ezivulekile. Siyabonga ngalokhu futhi kudala umuzwa wenduduzo engakaze ibe khona, okuyizwa kuphela imilenze yakho oyithandayo.
Ama-boots asehlobo, okwenziwe nge-lace ne-azhura - ukukhetha okungcono kunazo zonke, okungakayeki izikhundla emibonweni yemifino iminyaka emibili kakade. Lezi zikhumba zibuka imilenze yamantombazane ngokumangalisayo ngokukhululekile nangomusa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, abavali umoya, ukuze imilenze ikwazi "ukuphefumula". Ngakho uma kukhona ngisho nokungabaza okuncane uma ukhetha amabhuzu ehlobo, kufanele umelele onobuhle bezinyosi. Khona-ke ngokuqinisekile ngeke udabuke!
Uma sikhuluma ngesithende, khona-ke kungaba khona kakhulu. Nokho, kulo nyaka umkhuba oyinhloko yisiteji. Akuhlosisi nje izicathulo zasebusika kuphela, kodwa futhi izibopho zokukhanya zasehlobo. Amamodeli angatholakali kakhulu amabhuzu ashukunywe phansi. Futhi ngokungafani namabhodlela asebusika, onobuhle behlobo bangasetshenziswa ngokugcwele noma yikuphi ukulinganisa kombala, futhi abakhanyisa futhi abanamahloni, kukhona okungcono kakhulu.
Kungani kufanele ugqoke izicathulo? Impendulo yalo mbuzo ayiqukethe izinto eziyinkimbinkimbi nezinkinga.
Amabhuzu ahlanganiswe ngokuphelele nezicathulo, ama-breeches of denim, iziketi ezibucayi nezembatho ezincane. Ukuhlanganiswa nesigqoko kuphumelele kakhulu, ikakhulukazi uma kwenziwa ngendwangu yokukhanya ekhanyayo. Lesi sithombe singumlingisi we-romance, isisa futhi ngesikhathi esifanayo ngokobulili nesibindi. Inhlanganisela eyithakazelisayo, akunjalo?
Uma izinkinobho ze-boot zenziwe ngesiqunto samahhala, futhi ubude babo bufinyelela phakathi kwe-shin, ungakwazi kalula ukudala isithombe kwisitayela se-cowboy. Ngaphezu kwalokho, lesi sitayela esikhathini esizayo sasehlobo sonyaka ka-2014 sizobaluleka ngokukhethekile. Ukuze abadluli emgwaqweni bajikeleze, kwanele ukuthola ama-short denim shorts ne-snow-white or checkered shirt. Yebo, phezulu kokuzibophezela kwesithombe kuyoba isicathulo kanye nezibhokisi ezitayela ze-cowboy, ezenziwe ngekhanda eliphakeme eliphezulu lesikhumba noma ama-sandy sandes.
Idokhumenti ephathekayo: izicathulo + isikhwama njengendlela yokuhamba kule nkathi ebandayo
Njengoba ku-tank: iqoqo elisha lezicathulo ze-Casanki Tank
Ungakhetha kanjani amabhuzu alungile ukuze unciphise umlenze?
Izicathulo zase-Classical zezinkampani zanamuhla zamabhizinisi
Sakhetha izingubo ngaphansi kwezicathulo kumuntu oyedwa onogandaganda omhlophe
Indlela yokuthola isisindo ngokushesha intombazane
Indlela yokukhetha i-dishwasher ekhishini
Kuzophila kanjani eLviv ngo-2013?
Burgers eziboshwe ngemifino
Iyiphi inyanga ingane ingadla ukhilimu omuncu?
I-sweet dessert croutons
I-romance yesevisi - kuzokwenzekani emsebenzini
Cheesecake ngesitayela saseNew York
Ikhalenda Lunar nothando
Amagilebhisi ejelini le-sea-buckthorn
Izakhiwo zokuphulukisa ze-plantain kanye nezinzuzo zendlela esekelwe kuyo
Iresiphi elula yokupheka iklabishi esetshenziswe endaweni eningi
Ikhishi - isampula yokuhlanzeka kowesifazane wangempela